Tsidiho i Suisse vaovao: Ny trano fandraisam-bahiny ampiasain'ny Robots dia tsy mila arabe sy fiara, fa Lamas, osy ary toerana mahafinaritra.
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny indostria fihaonana » Tsidiho i Suisse vaovao: Ny trano fandraisam-bahiny ampiasain'ny Robots dia tsy mila arabe sy fiara, fa Lamas, osy ary toerana mahafinaritra.
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • People • Vaovao Mafana Soisa • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
sary: ​​Elisabeth Lang
Ny fahalianana, ny fahafaha-manao tambajotra, ny fifanakalozan-dresaka izay nampisy hotely sy mpiara-miombon'antoka fampirantiana mihoatra ny 100, izay niara-niasa tamin'ny indostrian'ny Hotely taorian'ny 600 andro nijanonana mangina noho ny fameperana Corona tsy misy farany.
Halle 550 dia lavitra ny hotely kintana 5 manjelanjelatra sy manintona any Zurich, izay anaovana an'io fihaonana an-tampony io.
Fihaonana an-tampon'ny Hotellerie Suisse fandraisam-bahiny voalohany any Suisse nokarakarain'ny Hotelrevue, famoahana varotra eo an-toerana, nahasarika mpandray anjara 1152 tamin'ity herinandro ity.
Ny hetsika dia nanasongadina ny maha-zava-dehibe ny fifanakalozan-kevitra manokana ao amin'ny tontolontsika vaovao momba ny digitalisation sy ny birao an-trano.
Halely 550 dia toerana any Zurich Oerlikon.
Ny Vovonana fandraisam-bahiny fandraisana vahiny no voalohany indrindra tany Suisse hatramin'ny nahitana areti-mandringana COVID-19 tamin'ny martsa 2010
Mba hiarovana ny mpitsidika dia tsy maintsy nampiseho mari-pankasitrahana momba ny vaksiny (Pass Pass) ny tsirairay. Ho an'ireo tsy vita vaksiny dia ilaina ny fitsapana ratsy COVID-19.
Nahagaga fa tsy nisy ny politika saron-tava, rehefa avy nandalo ny toeram-pisavana nankany Halle 550. Nahatonga fisalasalana kely ho an'ny dokotera io fa faly tokoa ireo mpandray anjara.
Tsy misaron-tava fa tsy miaina - mifanaraka amin'ny fihetsehana.
"Better Together" no resin'ny filoham-pirenena Hotellerie Andreas Züllig tamin'ny lahateniny.
“Mila mamolavola paikady vaovao momba ny Post Pandemique isika, toy ny nitondrantsika ny fitantanana ny krizy miaraka amina hevitra mamorona. Amin'ny maha-mpandraharaha hotely sy mpandraharaha antsika dia tsy mpitondra fotsiny isika fa koa izay manaiky ny fironana sy ny fahatsapana ny zavatra azo atao ary mihetsika amin'ny fahitana mialoha.
Hanao ahoana ny fizahan-tany any Suisse aorian'ny areti-mandringana?
Fa ny tena ilain'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny, ny zotram-pitaterana an'habakabaka, ary ny indostrian'ny fizahantany dia andiam-panantenan-tena.
Betsaka ny resaka momba ny fanavaozana sy ny fanaovana nomerika, fa inona no tena tadiavin'ny mpandray anjara?
Robot iray hanaovana fisavana?
Efa lasa io ary efa noresahina taona maro lasa izay. Inona no tena ilaintsika amin'ny tontolon'ny Post Pandemie?
Ny zavatra ilaintsika aorian'ny fijanonana maro any an-trano dia famihina.
Omeo famihina ny mpitsidika!
Ireo mpitsangatsangana mihoatra ny hatramin'izay dia mila fitsikiana lehibe sy fandraisana tsara amin'ny fandraisana azy dia tsotra tahaka ny izy io.
Na izany aza, ny tena zava-baovao dia ny minitra robotic (avy amin'i Robotise, Alemana) izay nitondra ny zava-pisotro naniry mivantana tany amin'ny efitrano fandraisam-bahiny.
Ny fanontaniako hoe ohatrinona no vidin'ity robot ity?
Ny valiny tsotra dia robot mitovy amin'ny an'ny mpandroso sakafo.
Saingy mety hiovaova izany avy amin'ny toerana misy karama be izay aloa any Suisse ka hatramin'ny karama aloa any amin'ny firenena mora vidy, toa ny any Azia.
Fa tsara ve ny misy robot tsy misaron-tava tonga manatitra ny zava-pisotro mandritra ny areti-mandringana, miala mangina indray raha mbola maharitra ny bateria?
Ny fifanakalozan-kevitra tontonana miaraka amin'ireo mpandahateny 84 izay nandray ny mikrô dia singa fototra tamin'ny Fihaonana an-tampon'ny fandraisana vahiny 2021
Ny fizahantany no voa mafy indrindra, hoy ny fanamarihana Urs Kessler, CEO Jungfrauen Bahnen, nandritra ny adihevitra momba ny rahoviana no hiverina ny tsena iraisam-pirenena.
Tsy misy vinavina.
Nihena ny tsena anatiny Swiss tamin'ny taon-dasa (2020).
Ny Swiss indray mandeha any ivelany. Na izany aza, ny fizahan-tany Soisa dia mahazo isa marobe avy any Alemana, Belzika ary UAE.
Talohan'ny areti-mandringana, Suisse dia nanana mihoatra ny 70% ny efitrano fandraisam-bahiny nipetrahan'ny mpitsidika avy any Azia.
Ny fiverenan'ireo mpitsidika sinoa aorian'ny lalao Olaimpika dia ho tapa-kevitra. Suisse dia manana tetikasa roa mampanantena any Azia amin'ny taona ho avy. Ny fizahan-tany Suisse dia misy mpiasa manao fampiroboroboana monina any Shina, India, Southwest, ary Azia atsimo atsinanana. Raha ny filazan'ireo avy ao anatiny dia misy fitakiana fizahan-tany goavana avy any amin'io faritra io.
Hiverina ny tsena toa an'i India, Azia atsimo atsinanana ary Brezila. Azo antoka fa i India dia mpanakalo lalao ho an'i Suisse. Fa ny fanaovana vaksiny kosa no olana lehibe ampiarahina amin'ny fanodinana visa mora sy mora.
Halle 550 ao Zurich: Toerana fihaonana an-tampon'ny fandraisana vahiny
Miaina anaty jadona amin'ny alàlan'ny tsy fanaovana vaksiny isika hoy Dieter Vranck Tale Jeneralin'ny Swiss International Airlines: 90% amin'ny Cabin Crew no vita vaksiny saingy tsy maintsy miatrika ireo izay mbola tsy vita vaksiny isika.
Ny fepetra miova tsy tapaka rehefa mandeha dia olana goavana. Ny vaksiny no tapakila lehibe ahazoana toerana matotra. Betsaka ny sidina no foana, fa raha vao esorina ny quarantine - mirongatra vetivety ny famandrihana.
Soa ihany isika fa mahazo vondrona maro kokoa avy any Etazonia. Ny habetsaky ny vahiny avy any Amerika dia avo tahaka ny talohan'ny areti-mandringana.
Saingy mbola tsy afaka mandeha any Amerika isika, ary tsy afaka manohy raha tsy mandeha any Etazonia mandritra ny fotoana maharitra. Raha tsy misy sidina kargo dia hanana sidina foana isika amin'ny antsasaky ny lalan'i Etazonia.
Hiverina tsimoramora ny sidina fandraharahana fa manantena fihenan'ny 30% hatramin'ny 2023. Nanana taona an-tsoratra tamin'ny taona 2019 nahazoana tombony 53 tapitrisa.
Ny taona 2022 dia tsy hiverina amin'ny ara-dalàna ihany koa- fa mivoatra i Eropa; Toerana faha-2 any Etazonia ary toerana faha-3 Azia manazava an'i Vranckx. Ao anaty toe-javatra iray izay tsy ahafahantsika mametraka zava-baovao.
Tsy tapaka ny sidina, hoy i Vranckx, tale jeneralin'ny Soisa.
Fihaonana an-tampon'ny fandraisana vahiny 2021
Raha i Martin Nydegger, talen'ny fizahan-tany any Suisse, dia miangavy ho an'ny rehetra amin'ny filazany hoe: Tsy manam-potoana hiandrasana amin'ny sehatra misy anay izahay. Tapitra ny fizahan-tany.
Matoky i Nydegger fa hiverina ny tsena iraisam-pirenena amin'ny 2023. Firenena premium ho an'ny mpitsidika i Suisse. Manana kalitao izy io, tsy resaka marketing.
Ho an'ny orinasa MICE, nifarana be ny fizaran-taona 2019.
Tsy misy sisa tavela amin'izany ary miresaka momba ny 5% kely isika amin'ny 2021.
Tsy vitsy ihany koa ny mpiasa ilaina ankehitriny.
Fa ny orinasa Mice ve mety ho tafavoaka velona?
Ny indostrian'ny hotely MICE any Suisse dia voatery hamandrika amin'ny alàlan'ny sehatra toy ny booking.com, ora, raha toa ny tanora kosa mety mankany Google hamandrika hotely fihaonambe.
48% ny famandrihana dia vita amin'ny finday amin'ny alàlan'ny sehatry ny finday. Ny trano fandraisam-bahiny fihaonambe koa dia azo alefa amin'ny alàlan'ny Amazon, na ny Meetings Select, izay misy fiatraikany lehibe amin'ny mpandrafitra fivoriana.
Ny Hotely mari-pankasitrahana tamin'ny taona natolotra voalohany an'i Nadja sy Patric Vogel avy amin'ny Fairytale Hotel Braunwald (Kintana 4).
Betsaka ny resaka momba ny fanavaozana sy ny fanaovana nomerika, saingy ity hotely ity dia tsy manana lalana mankany akory.
Tsy misy fiara i Braunwald.
Ny Braunwaldbahn dia mitondra anao hatramin'ny antsasak'adiny avy eo amin'ny tobin'ny lohasaha. Miarahaba anao Lamas, Goats rehefa mandalo ny "tetezana Golden Goats".
Omby sambatra, akoho amam-borona mihetsiketsika bitro ary toerana mahatalanjona miandry anao.
Nahoana no Hotel Fairytale?
Fotoana taloha lasa izay, zazavavy kely iray dia nitomany mafy tao amin'ny trano fisakafoanana ary nijanona fotsiny rehefa nanome toky ny tompony Fridolin Vogel fa hitantara ny angano.
Hatramin'izao, io fomba amam-panao io dia miaina sy mankalaza isan'andro an'i Nadja an Patric Vogel. Mendrika! CONGRATS!